Meri Pyari Kanchhi Didi - मेरी प्यारी कान्छी दिदी(चिठी) - Letter: My Darling Litter Sister
Chitthi: Meri Pyari Kanchhi Didi [मेरी प्यारी कान्छी दिदी(चिठी)] - Letter: My Darling Litter Sister
मेरी प्यारी कान्छी दिदी,
मनभरिका अनगिन्ति सम्झना अनि मुटुभित्र संगालेको स्वप्नील प्यार तिमीलाई । जसरी तिम्रो ओठमा मुस्कान फुलिरहेछ, हातमा सफतलाको दियो जलिरहेछ, यो सदा सदा रहिरहोस् यो दुःखी भाईको कामना । तिम्रो लागि सायद यो परजिवी भाइको के नै बन्न सक्ला र नबीन खवर तर पनि आज धेरै दिन भइसकेको छ तिमी मदेखि टाढा गएको त्यसै त्यसै आफू एक्लो भएको महसुस लागेर मात्र यो पत्र कोरेको हु“ ।
कहिले काही त सोच्दी हौं हामी बीचको सम्बन्ध रगतको नभएर मनको भावनाले बाधिएको भए पनि कति सुमधुर छ भनि । तिमीलाई कति खुसी लागेको छ मलाई थाहा नहुन पनि सक्छ तर मलाई यति मात्र थाहा छ कि तिमी मेरी दिदी हौं र म तिम्रो भाइ नै हु“ चाहे म आ“खा खोली भनु वा आ“खा बन्द गरी रगतको साइनोले नै नछोए पनि के भो र ? समुन्द्रको लहरहरू जसरी किनारमा आई सारा चिजहरू स“गै बडारी लगिदिन्छन् उही समुद्र म बनु“ तिमी लहर अनि सारा दुःखहरू किनारा बनुन ।
दिदी जीवन रोजाइ नभएर भोगाई रहेछ । तलाउमा संगालीएको स्थिर पानी रहेनछ जीवन । ठूला ठूला गल्छीहरू छिचोल्दै हा“सोहरूलाई बगर बनाइ आ“शुहरूलाई अघि लगाइ बगिरहनु पर्ने नदी रहेछ जीवन । सफलता भनु वा सुःख सबै क्षणिक बन्दा रहेछन् । भोगाइमा कुजीएका हात हेर्दै गोधुली सा“झमा असफलताको छाया“मा बसी, भाका फेरिफेरि सार¨ीका तारहरू एकसुरले रेटिरहदा, आधिबेहरी गीत गाउ“छ भने, डालीहरूबाट फूल खसिदिन्छन् भने, दिदी मेरो के दोष छ ? आ“धिबेहरी सदा मलाई भगाइरहनथ्यो, मेरा रहरहरू उडाइ लगिदिन्थ्यो अनि फूल म पूजा ठान्थे जीवनपथ सम्झन्थे । यिनै आ“धिबेहरी र फूलहरू वीचको सम्बन्ध खोजीमा अञ्जान बनि हराइरहेका बेला निसंकोच मेरो हातथामी आफूस“गै आफ्नो घर भित्र लगेर मेरा नयनका थकानहरू भगाई दिने कोही भेटेपछि मलाई किन नै चाहियो र ‘आधिबेहरी र फूलको’ सम्बन्ध ?
दिदी, यो संसार र यहा“का मानिसहरू सबै स्वार्थी छन् त्यति नभएर लाग्छ आज भोलि त स्वयम परमात्मा पनि स्वार्थी बन्दै हुनुहुन्छ । आफ्नो भनी विश्वास दिन आफू पछिको छा“या सम्मलाई पनि नहुने भैसकेको छ । प्रत्येक पाइलाहरूमा विश्वासका बा“धहरू फुट्दै जान्छ, र्उिर्लएर अविश्वासका बाढीहरू जीवनको फा“टमा पसेपछि सारा सम्बन्धहरूलाई स्वार्थको छालले बेरेर स्वार्थीहरू जीवन खोतली बगि जान्छन । फूल चुस्ने भमराहरू फूललाई नै दोषी भनि दिन्छन्, डुबी रहेको नाउ भित्र नै कैदी बनाएर पापीहरू भागिदिन्छन् ।
दिदी कसैले मेरो मनलाई हजार टुक्रा–टुक्रा बनाएर फोरी दिएको छ । यदि मन पनि घर बनाउने कंक्रिट भइ दिन्थ्यो भने बिस्तारै आजसम्म यो मन पनि एक भइसक्थ्यो होला । एउटी साथी जसलाई मैले पवित्र फूल ठानी पुजे, परिवार भित्रकै सदस्य ठानी विश्वास गरे उसैले मलाई लक्ष्मण रेखा कोरि छुटाइ दिएकी छे । ‘तिमी मेरो को हौं ?’ भन्ने प्रश्नको पर्खालले मेरो नयन ढाकी दिएकी छे । त्यो पर्खाल अनि लक्ष्मणरेखा मेटाउनको लागि तिमी मेरी दिदी बनेर आएकी हौ । एक दिन तिमीलाई कसैले मेरो परिचय माग्दा तिमी मौन बसेकी थियौ त्यही उत्तर बन्नको लागि तिमी दिदी बनेर आएका हौ । स्वार्थी मानिसहरूको आ“खा खोलिदिन दिदी बनेर आएकी हौ तिमी ।
उहि प्यारो भाई,